08 | February | 2020 | Danya Wadi
Archive | February 8, 2020
မြောက်ဒဂုံ CBဘဏ်ခွဲဓားပြ တိုက်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပါက တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိသည်ကို သိနိုင် ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီမှ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ပြော
By danyawadi February 8, 2020 Leaveacomment
February 8, 20200 ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် CB ဘဏ်ခွဲဓားပြတိုက်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသည်ကို သိနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ CB ဘဏ်ခွဲတွင် ယနေ့(ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်)၊ နံနက်ပိုင်းက ကျပ်သိန်း ၆၀၀ ဓားပြတိုက်ခံရပြီး ဗုံးထောင်ထားမှုဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။“ ဒီနေ့မနက်မြောက်ဒဂုံ CB Bank မှာ ဓားပြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိဘူး ဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် အခုလိုဒုစရိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာလည်းဖြစ်တယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောသည်။ အဆိုပါ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် CB ဘဏ်ခွဲကို လက်ရှိ(ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်)၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“ ဘဏ်ကတော့လက်ရှိမှာပြန်ဖွင့်ထားပြီးပါပြီ။ နေ့လယ် […]
Hasina seeks EU support for Rohingya return to Myanmar
Prokerala By IANS Fri, Feb72020 Refugees in the Kutupalong Rohingya Refugee Camp in Cox’s Bazar, Bangladesh, in July, 2018. (Photo: UN/IANS). Image Source: IANS News Dhaka, Feb7: Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has sought continued support of the European Union (EU) to ensure safe, dignified, and sustainable return of the displaced […]
Dhaka, Rome stress intense cooperation between EU, Bangladesh
Prothum Alo—— Prime minister Sheikh Hasina holdsabilateral meeting with her Italian counterpart Giuseppe Conte at Palazzo Chigi, the official residence of the Italian prime minister, in Rome, Italy on5February 2020. Photo: PID Prime minister Sheikh Hasina has sought continued support of the European Union (EU) including Italy to ensure safe, dignified […]